KDE 4 oyiri dialog dị ka KDE 3.X | Site na Linux
Dị ka ezigbo onye ọrụ ọ bụla nke KDE ị kwesịrị ịma, na mbata nke mbipute 4 notma Ọkwa na-ike n'ime obubọk, nakwa dị ka dialog nke na-enyefe mgbe na-edegharị faịlụ.
E nwere ụzọ dị mfe iji weghachite okwu a dị ka ọ dị KDE 3.x. Anyị pịa aka nri na akara ngosi panel dị ka egosiri na foto a:
Anyị na-ahọrọ Mmasị Notma Ọkwa. Ọzọ anyị na-achọpụta ọnụọgụ abụọ nke mbụ na-egosi na windo na-egosi ihe oyiyi na-esonụ:
Na njikere. Site ugbu a gaa n'ihu mgbe anyị na-edepụta ihe, usoro nnomi ahụ ga-apụta dị ka windo dị iche na ọ bụghị dịka ọkwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » KDE 4 oyiri dialog dika KDE 3.X
HEH ... ka anyị lee, gwa anyị ... gịnị ka ị hụrụ na oyiri nke onyonyo ahụ? HAHA… Kaspersky, ịtụnanya GGGRRR ¬_¬
KZKG ^ Gaara na gi mgbe itinyere Gnome?, Elav enyela mgbama ugbua anyi chere nke gi hahahahahaha
Onye ahụ ekwughị Gnome ma ọ bụ tie. Ma Gnome, ma ọ bụ Debian hahaha .. Ugbu a ọ na-apụ apụ n'ihi na ọ wụnye Grub2 na Arch ma na-anwa imezi Grub ihe karịrị otu awa na-enweghị nsonaazụ ọ bụla. Lelee ihe m gwara gị HAHAHAHAAHAHA
Have nwere ihe abụọ ị ga - eme, ma ọ bụ nyefee ya aka ma ọ bụ gosipụta nke ọma na ọ gbanwee na Debian, onye gị na ya na - eji Arch maka na ọ na - eweta nke kachasị ọhụrụ, mana ... jiri iwe nke oge gara aga, hahaha.
Hahaha ugbu a ọ na-afụ ụfụ n'ihi na ọ nweghị ike iweghachite Grub ma nwee ike, ọ ga-arụnye Arch ọ hụrụ n'anya ọzọ, nke mere Rolling, ọ naghị eji Grub2 ...
Hahahaha Ọ fọrọ nke nta ka m nwụọ n'ihi ịchị ọchị mgbe m hụrụ ka ọ na-ahapụ ọnụ ụzọ iwe ya .. Lee ihe m gwara ya hahaha
Fewbọchị ole na ole gara aga, ejiri m KDE karịa otu izu. M na-eme njem na pc m nwere nwere Solo OpenSuse, nke bụ eziokwu bụ na atụghị m anya Gnome nke ukwuu, n'agbanyeghị na ọ siri ike iji ụfọdụ mmemme ọhụrụ mee ihe. Ekwesịrị m ịsị na KDE ka mma ma nwee mmetụta siri ike. Greetings KZKG ^ Gaara
Enwere m ike ịgba akaebe na ya. Ọbụna ugbu a, mgbe tweaks niile m mere, KDE na-enwe mmetụta karịa mmiri karịa Gnome2. 🙁
Ihe nchekwa dị PC gị nwere ole ọ na-eri gị? Echere m na i kwesiri ime nkuzi nkuzi.
Monday enweghị ida. Site na 1Gb ọ gafere 300Mb na ọtụtụ ngwa mepere .. 😀
300Mb ọ dịghị ihe ọzọ? i kachasị nke ọma, enwere m olile anya.
Anyị na-eche maka onye nkuzi, etinyego m kde gburugburu ebe obibi, yabụ ị ga-ahụ na m nwere okwukwe na gị, anyị ga-ahụ etu o si maa mma na ọkụ, echi na-elele post gị.
M kwere nkwa na m ga-eme ya taa .. 😀
Nhọrọ ahụ apụtaghị: C M na-eji KDE 4.11.5, akụkụ "Popup igbe" apụtaghị, naanị nhọrọ 2 mbụ.
Na-achọ GNU / Linux buut na E4rat